FERPA - XEERKA ASTURNAANTA IYO XUQUUQDA WAXBARASHADA QOYSKA
LA SOCODSIIN XUQUUQEED
Xeerka Asturnaanta iyo Xuquuqda Waxbarashada Qoysku wuxuu siinayaa waalidiinta iyo ardayda 18 jir ama kaweyn (ardayda u qalanta) xuquuq gaara marka ay timaado macluumaadka waxbarashada ee ardayga. Xuquuqahaasi waa:
Xuquuqda in la eego iyo in dib loogu noqdo diiwaanka waxbarashada ardayga iyadoo la buuxinayo galka codsiga (Appendix G of School Board Procedure 515) loona soo gudbinayo maamulaha.
Xuquuqda codsiga wax ka bedelka diiwaanka waxbarashada ardayga ee ay waalidka iyo ardaygu rumaysan yihiin inayna sax ahayn, marin habaabin yihiin ama haddii kale ay xadgudub ku yihiin xuquuqda asturan ee ardayga marka loo eego PERPA iyagoo buuxinayo galka codsiga (Appendix H of School Board Procedure 515) una soo gudbinaya maamulaha.
Xuquuqda in la siiyo ogolaansho qoraala ka hor intaanu iskuulku bixin macluumaadka la garan karo ee qofka ee ku jira diiwaanka waxbarashada ardayga, marka laga reebo xaalado u oglaanaya PERPA inay bixiyaan ogolaansho la’aan. Marka laga reebo hal mid, u ogolaanaysa inay bixiyaan ogolaansho la’aan, waa bixinta madaxda iskuulka iyagoo fiirinaya danta waxbasrasho ee shargiaga ah. Markii laga codsado, iskuulku wuu siiyaa diiwaanka waxbarasho amar la’aan madaxda iskuulada kale, degmooyinka kale macadyada kale ee heer jaamacadeed kuwaas oo ardaygu rabo inuu iska diiwaangeliyo, ama kaba diiwaan gashanyahay, haddii ujeedadu faafintu tahay wareejinta ama is qorista ardayga.
Xuquuqda ka xaraysashada cabasho wasaaradda waxbarasha Maraykanka ku saabsan eedaymo fashilaad ka dhacay Iskuulada Nawaaxiga Osseo-ISD 279 inay u hogaansamaan shuruudihii PERPA. Magaca iyo ciwaanka xafiiska maamula PERPA waa:-
Iskuulada Nawaaxiga Osseo, ISD. NO.279, waxay u aqoonsadeen macluumaadka soo socda ee la garankaro ee qofeed ee ku jira diiwaanka waxbarashada ardayga “Macluumaad Hage” waxaana arki kara macluumaadkaas dadweynaha qoraal fasax hore la’aan.
Magacyada ardayga iyo waalidkiis;
Imaashaha ardayga ee iskuulka;
Taariikhaha Ardayga la qoray iskuulka;
Fasalka ardaygu marayo (tusaale,, 9aad, 12aad iwm.);
Shahaadooyinka ardayga la gudoonsiiyey;
Ka qaybgalka Ardayga Isboortiga maamulka iskuulku aqoonsan yahay
Culayska iyo jooga ardayga haduu ka tirsan yahay koox ciyaareed
Sawirka Ardayga, oo ay ku jiraan cod iyo muuqaalka ardayga oo ka qaybgealaya xaflado iyo dhaqdhaqaaq ciyaareed oo iskuulka ah, iyo
Maclumaad la xiriira waxyaabo lagaga qoray/sheegay ardayga daabacadaha degmada ama iskuulka (tusaale, buuga sanadka, jaraa’idka iyo boga webka) oo aan loo arki karin kuwo waxyeelo leh ama duulaan ku ah asturnaanta haddii la bixiyo.
Macluumaadka dadweynaha ay heli karaan waxaa raaca, macluumaad u khaasa waalidka/masuulka iyo Ardayga, ardaygii u qalma ama hay’adaha iyo dadka kale ee loo ogol yhay sida ku xusan qoraalka gudiga dugsiyada:
Magacyada ardayda kale ee ardayga fasalka kula jira;
Sawirada qolalka fasalada ardayga iskuulkiisa gudahiisa iyo
Ciwaanada guriga iyo emailka ee ardayda iyo waalidiinta ku jira duruufo gaara ay ogolaadeen qoraalka Gudida Iskuulada.
Waalid/Masuul arday ama ardayga u qalma wuu diidi karaa in la faafiyo macluumadka ku jira galka iyadoon qoraal ogolaansho marka hore laga haysan waalidka/masuulka ama ardayga u qalma marka laga reebo shuruucda Gobolka iyo dawlada Maraykanka. Si looga dhigo macluumaadka galka mid kuu gaara, waalidka/masuulka ama ardayga u qalma waa inuu u soo gudbistaa warqad diidmo sii deyn macluumaad (Appendix C) maamulaha iskuulka ama Kormeeraha guud ee iskuulada.
Galka sannad buu sidaas kuu ahaanayaa ama intii uu wax ka bedel qoraala ku sameeyo waalidkii/masuulkii ama ardaygii u qalmey marba kii hor dhaca.